Hordhacyada Nidaamka Qiimaynta Qufulka ee WAP
Nidaamka xiritaanka raadiyaha waa nidaamka keydka cufnaanta sare ee iswada otomaatiga u ah. Waxaa loo qaabeeyn karaa inuu noqdo LIFO (isku xirka iyo iskudhidda isla isla'eg) iyo sidoo kale FIFO (iskudhac hal dhinac iyo ka degidda dhinaca kale). Nidaamkan kaydinta isku-xidhka ee loo yaqaan 'semiautomated compute', waa ...Akhri wax dheeraad ah »
Qalabka Raadiyaha Raadiyaha wuxuu hirgeliyaa Nidaamka Kaydinta Cufnaanta Sare
Nidaamka kaydinta cufan, roogagu waa qaybta ugu muhiimsan. Nidaamka kaydinta degdegga ah ee bilowga ah ayaa badanaa loola jeedaa dhammaan noocyada qaababka loo yaqaan 'rack', oo ay ku jiraan wadista gaadhiga, loox dhabarka riixida, kuraasta culeyska, wiishka mobilada iyo wixii la mid ah. Intaa waxaa sii dheer, dadka qaar ayaa sidoo kale u tixgeliya ASRS sidii hirgelinta s ...Akhri wax dheeraad ah »
Suuqa Suuqa, Qalabka Birta, Wadada Shanaad, Xarig, Asal aamisan, Xidhitaanka lakabyo Badan,